Indawo yaseMoz: Yandisa ubukho bakho kwi-Intanethi ngokuDwelisa, igama, kunye noLawulo lweeNkonzo | Martech Zone
Njenge uninzi lwabantu funda malunga nokufumana amashishini endawo kwi-Intanethi, ubukho be-Intanethi obomeleleyo kubalulekile. Ulwazi oluchanekileyo malunga neshishini, iifoto ezisemgangathweni ezisemgangathweni, uhlaziyo lwamva nje, kunye neempendulo kuphononongo zinceda abantu ukuba bafunde ngakumbi malunga neshishini lakho kwaye bahlala befumanisa ukuba bakhetha ukuthenga kuwe okanye okhuphisana naye.
Uluhlu lolawulo, xa zidityaniswe nolawulo lwegama, zinokunceda amashishini endawo aphucule ubukho bawo kwi-intanethi kunye nodumo ngokubenza bakwazi ukulawula ezinye zezona zinto zibalulekileyo kubakhenkethi nakwiinjini zokukhangela. Ngezisombululo ezininzi phaya, kubalulekile ukuba uqwalasele imiba enjengokusebenza, ukusebenziseka lula, kunye neendleko.
Ngolawulo lodweliso oluzenzekelayo kunye nokusasazwa kwedatha yendawo kwiindawo ezininzi kunye nolawulo lwegama, Indawo yaseMoz yenza ukuba ugcine uluhlu oluchanekileyo ngokukhawuleza, uphendule uphononongo, kunye nokuthumela uhlaziyo kunye nokunikezelwa. Isixhobo sethu ekulula ukusisebenzisa siyilelwe ukwandisa ubukho bakho kwi-Intanethi, wandise ukuzibandakanya kwabathengi, kwaye ukhulise ukubonakala kwakho kukhangelo lwasekhaya ngexesha elincinci kunye nomzamo. Yakhelwe zonke iintlobo zeenkampani, ukusuka kumashishini amancinci ukuya kumashishini amakhulu, angatshatanga ukuya kwiindawo ezahlukeneyo, kunye neearhente.
Gcina Uluhlu oluchanekileyo
Kwi-SEO yendawo, uluhlu olupheleleyo noluchanekileyo luluhlu. Ukugcina idilesi, iiyure zokusebenza, kunye neenombolo zefowuni zihambelana kwaye zihlaziyiwe kubalulekile ukukhangela kunye namava abathengi. Indawo yaseMoz ikunceda ukuba wenze ngokulula kwaye ulawule uluhlu lwamashishini endawo kuGoogle, Facebook nakwezinye iisayithi ukunceda abathengi ukuba bafumane kwaye bakhethe ishishini lakho.
Ungaluhlaziya lonke uluhlu lwakho kwideshibhodi enye, kwaye ufunde ukuba yeyiphi idatha, iifoto, okanye omnye umxholo ofunekayo ukugqibezela uluhlu lwakho kunye neeprofayili ukuze abathengi bakhawuleze babone ukuba ishishini lakho lenza ntoni kwaye lilungile na kubo. Uluhlu luhanjiswa ngokuzenzekelayo kuthungelwano lweqabane lethu, kunye noluhlu lwethu oluqhubekayo lokungqamanisa, uluhlu lwakho luhlala luhlaziywa kwiinjini zokukhangela, iirejista ezikwi-intanethi, imithombo yeendaba kwezentlalo, iiapps, kunye nezihlanganisi zedatha ngexesha elincinci kunye nomzamo. Kwaye inkqubo yethu yokuzenzekelayo yokuchonga, ukungqina kunye nokususa udweliso oluphindaphindiweyo kunceda ukuphelisa ukudideka.
Indawo yaseMoz ikwabonelela ngezalathi zentsebenzo eziphambili, ezinje ngesalathiso sokubonakala, amanqaku akhoyo kwi-Intanethi, kunye nenqaku lokugqibelela kweprofayili. Iya kukwazisa kwakhona xa kufuneka uthathe amanyathelo ngezaziso kunye nezaziso zezinto ezifuna ingqalelo.
Sisebenzisa iMoz yaseKhaya ukubeka esweni uluhlu lwethu lodweliso, ukubona ngokulula uluhlu lwethu 'ukubonakala kukhangelo kunye nokuqonda ukusebenza kwoluhlu kumanqanaba ahlukeneyo. Sikwazile ukutyhala ulwazi oluhambelanayo kuluhlu oluphambili kwaye sonwabile ngeziphumo esizibonileyo.
UDavid Doran, uMlawuli weQhinga ku I-Oneupweb
Jonga uluhlu lwakho lweshishini simahla
Lawula igama lakho
Kwinqanaba lendawo, uphononongo lunokwenza okanye lwaphule ishishini. Ngaphezulu I-87% yabathengi ithe balixabisile uphononongo lwabathengi kwaye yi-48% kuphela eya kuqaphela ukusebenzisa ishishini elinenkwenkwezi ezingaphantsi kwesine. Ngapha koko, amashishini amancinci anokungabonakali nakwiziphumo zokukhangela ukuba uphononongo lwabo alufikeleli kumda othile.
Uphengululo oluchanekileyo lunokunceda ukwandisa imeko yokukhangela kwendalo, kodwa impendulo yokwenyani kugxeko-ncomo olubi okanye oluxubeneyo ikhuthaza unxibelelwano ngakumbi neshishini lakho kunye nokunika umvavanyi ithuba lokutshintsha amanqaku.
Indawo yaseMoz ivumela abasebenzisi ukuba babeke esweni ngokulula, bafunde, kwaye baphendule kuhlolo kuzo zonke iinjini zokukhangela nakwiiwebhsayithi ezivela kwideshibhodi enye. Ulawulo lwegama lubaluleke kakhulu kwi-SEO kunye negama lakho, kwaye iMoz yaseKhaya ithumela uhlaziyo lwexesha langempela kunye nezaziso xa kuphononongwa ngokutsha. Ngaphezulu kwelo, ideshibhodi ikuvumela ukuba ulandele iindlela zohlolo, ukhetha amagama athile kunye nemilinganiselo ebonisa ukuphononongwa okuninzi. Ezi ntsingiselo zibonelela ngempendulo exabisekileyo evela kubathengi malunga nokuba yintoni into eyenziwa lishishini lakho ngokufanelekileyo kunye nokuba yintoni enokufuna ukuyilungisa.
Yabelana ngoHlaziyo kunye neZibonelelo
Ukubandakanya abathengi ngaphezulu kwemizuzwana embalwa kuya kusiba nzima ngemini. Ngezinye iisayithi ezininzi, amakhonkco kunye nolwazi olufunyenwe kwiphepha lokuqala leziphumo zophando, ukuma ngaphandle kukhuphiswano ngumceli mngeni.
Okwenza abathengi basabele kwaye bazibandakanye nabo, nangona kunjalo, zihlaziywa rhoqo kunye nezibonelelo. Ukugcina abathengi besazi malunga neendaba zamva nje malunga neshishini lakho, iimveliso ezintsha okanye iinkonzo, okanye izibonelelo ezizodwa zinokubachaphazela ukuba bathenge kuwe. Unokwabelana ngeendaba kuFacebook okanye uthumele imibuzo kunye neempendulo kwiprofayile yeshishini likaGoogle elivela eMoz Local.
Indawo yaseMoz ikunceda ukulawula ngokulula uluhlu lwakho lweshishini lendawo kunye nodumo kuGoogle, kuFacebook nakwezinye iisayithi ukunceda abathengi bafumane kwaye bakhethe ishishini lakho. Yenzelwe ukwandisa ubukho beshishini lwasekhaya kwi-intanethi, ukwandisa ukuzibandakanya kwabathengi, kunye nokwenza ngcono ukubonakala kuphando lwasekhaya ngexesha elincinci kunye nomzamo.
Sifumene iMoz yaseKhaya njengeqonga elihle lokunceda ukukhulisa ukubonakala kwabaxhasi bethu ekuhlaleni. Ngee-injini zokukhangela ezenzelwe ukujonga iziphumo ngokusekwe kwindawo yomsebenzisi, iMoz yaseKhaya inokuba nefuthe elikhulu ekuhanjisweni kwezinto eziphilayo.
Niall Brooke, Umphathi we SEO kwi UMatalan
Fumanisa ngakumbi ngeMoz yaseKhaya
tags: Imikhombandlela yeshishiniukuqokelela uphononongoLawuloUluhlu lolawuloUkubonelelwa kweshishini lendawoukalisho lwengingqiuphononongo lwendawoinkwenkwemoz yendawoulawulo lwegamaiqonga lolawulo lwegamauphononongo lolawulo